ỌGỤ NDỊ SOJA NA ESN: OKENYE ANỌZỊKWA N'ALA-IGBO? - hoo!haa!!
ANYỊ GA-AKPỌGBU ỤMỤ AKWỤKWỌ KAGARA N’AGỤỤ – NDỊ NTỌ
A GBAGBUOLA MMADỤ ANỌ N’IME NDỊ EKPERIME WAKPORO NDỊ UWE OJII N’ABA
NAỊJIRIYA NA – ACHỌ ITISA- NDỊ BISHỌỌPỤ ỤKA KATỌLIKI
E JIRILA NTARAMAHỤHỤ GBUO NWOKE BENUWE MAKA EBUBO OHI EWU
A KWADORO M ỌGỤ ỤGBỌELU NDỊ SOJA NA-ALỤSO NDỊ ESN N’Ọ̀LỤ́ – ỤZỌDỊMMA
EJIDELA NWATAKỊRỊ NWANYỊ JI ÉGBÈ BỊA AKWỤKWỌ ỊGBA ONYE NKUZI YA
NDỊ UWE OJII KANO ANWUCHIKỌỌLA NWOKE HISBAH N’ELU NWUNYE MMADỤ N’ỤLỌ NKWARI AKỤ
NWOKE ASỤGBUOLA NWANNE YA BỊARA ÍGBÒ ỌGỤ YA NA NWUNYE YA
ONYE UWE OJII MADORO M AFỌ N’ALA N’IHU NDỊ M NA-ACHỊ – EZE ỤMỤNA KPESARA KỌMISHỌNA NDỊ UWE OJII N’IMO
NWOKE ASỤGBUOLA NWUNYE YA MAKA EBUBO ỊGBA N’IRO
Home/NTỤGHARỊ UCHE/ỌGỤ NDỊ SOJA NA ESN: OKENYE ANỌZỊKWA N’ALA-IGBO?
ỌGỤ NDỊ SOJA NA ESN: OKENYE ANỌZỊKWA N’ALA-IGBO?
hoohaaco January 26, 2021
1 167 1 minute read
Owere: Kaọdịtaa, Gọọmenti Imo Steeti amachiela ngagharị ọbụla na mpaghara Ọlụ, Imo Steeti maka ọgụ na-ada n’etiti ndị soja Naịjiriya na ndị òtù nchekwa ESN nke taworo isi ọtụtụ mmadụ.
N’ezie, ihe butere òtù nchekwa Eastern Security Network (ESN) bụ na ndị Gọvanọ Mpaghara Ọwụwa Anyanwụ Ndịda emeghị ihe ha kwesịrị ime maka nchekwa Ala-Igbo.
Ndigbo na ndị Yoroba malitere mkparịta ụka maka nhiwe òtù nchekwa mpaghara (Regional Security Outfit). Ndị Gọvanọ Mpaghara Ọdịda Anyanwụ Ndịda, site na nkwado ndị Yoroba nile, n’agbanyeghị òtù ndọrọndọrọ ọchịchị onye nọ, ehiwela òtù nchekwa Amotekun kemgbe.
Ọ bụrụ na ndị Gọvanọ anyị katara obi mee ihe ha kwesịrị ime, ọgụ agaghị ịdị ugbua n’etiti ndị soja na ndị ESN n’Ọ̀lụ́.
Kaosiladi, òtù nchekwa ESN ma ọ bụkwanụ òtù nchekwa ọbụla ga – adị N’Ala-Igbo ekwesịghị ịbụ nke mmalite na njedebe ya ga-abụ n’aka ndị IPOB.
Òtù nchekwa ahụ, dịka ndị Yoroba si eme, ga-enwe ndị okenye na-elebara ha anya maka mgbazi, ka ha ghara imefe ihe oke.
Ajụjụ a na-ajụzị bụ o nwezikwara ndị okenye n’Ala-Igbo? Ọkwa okenye anaghị anọ n’ụlọ ewu amụọ n’ọ́gbụ̀. Kedụzi ndị okenye ga-edozi okwu a site na ịhụ na ndị Gọvanọ Ala-Igbo (ndị iwu hanyere ọrụ nchekwa n’aka) na ndị IPOB /ESN (ndị nọ n’ọ́gbọ́ ọgụ maka nchekwa Ala-Igbo Kaọdịtaa) ga-enwe mkparịta ụka iji mee ihe nile n’usoro ya?
“Ụzụ amaghị akpụ ogele, lee égbé anya n’ọ́dụ̀”. Leenụ ka ndị Yoroba si jiri akọ were dozie okwu dapụtara n’etiti ndị òtù Sunday Igboho na ndị soja. Ma ndị Gọvanọ ha, ma ndi ndu ha dịka Tinubu, ma ndị nnupụisi ha dịka OPC siri jikọọ aka ọnụ.
Nghọtahie sitere na nhọpụta Ọhaneze Ndigbo meziri ka nsogbu kazịa njọ. Na Ikemba Emeka Ojukwu, Agụ Ndigbo anọghịkwa abụghị na mmadụ agwụla n’Ala-Igbo.
NDỊ SOJA WAKPORO ÓTÙ OBODO N'IDEATỌ ỊBỌRỌ ỌBỌ NDỊ ÒTÙ HA ABỤỌ E GBURU
ONYE IGBO ONYE ALAKỤBA A GA-EMERINWU NA NHỌPỤTA N'ALA-IGBO? - UTHMAN ỊSA TOCHUKWU
TAA BỤ ỤBỌCHỊ NDIGBO (SEPTEMBA 29)
ZEERE ỤMỤ AGBỌGHỌ YI JIGIDA(Ọ̀RỌ̀KPỌ̀) ?
E NWERE EZIGBO NDỊ ÓJÍ MMIRI (RAINMAKERS)?
SỌỌSỌ EBE ỌRỊA KORO NỌ N’ENUGWU BỤ N’IME “BUS” NA KEKE
Ikechukwu Oti-Bernard says:
January 26, 2021 at 8:20 pm
Ike gwuru, nke ka njọ bu na onwero onye n’ime ndị okenye ma obu ndi kpatara ego na ala Igbo chọrọ itinye ọnụ n’okwu. Igbo si na “mmiri doro na eju, doro nwa nkịta”. Emere elu emere ala, anyị nile ga ahụ isi ya.
AKỤKỌ ỤWA (226)
NKE NA-EME UGBUA (28)
NTỤGHARỊ UCHE (6)
ARA AGBAALA AKWỤLA ABỤỌ N’OWERE, ỤJỌ JIZI NDI ỌZỌ
ONYE NCHE FULANI ADA JIZỌS GBURU YA BURU ỤGBỌALA YA GBALAGA
HMM! MMỌNWỤ NA-ATA NSUSU ỌNỤ “VAL”
NKE NA-EME UGBUA